Ho fitsinjovana azy ireny indrindra dia napetraka omaly ilay opération Avotr’aina, hamatsiana rano ny mponin’Antananarivo amin’ny Vidy mirary. Hatomboka amin’ny volana jolay ho avy izao izany ka ilay vidin-drano 50 Ar teo aloha ny iray bidón 20 litatra dia hahena ho 20 Ar izany. Hametrahana toerana fanasan-tanana ihany koa eny amin’ireo toerana fivezivezen’ny olona maro toy ny eny an-tsena…Ny UNICEF sy ny kaominina Antananarivo renivohitra ary ny Ministeran’ny rano no hifanome tanana amin’izany. Faritra telo moa no hisitraka ity tetikasa ity. Ankoatra an’Antananarivo dia hahazo tombony ihany koa ny ao Toamasina sy Moramanga.